सैनामैना नगरपालिकामा एमाले विजयी, रुपन्देहीका तीन स्थानीय तह एमाले पोल्टामा
सेतोपाटी संवाददाता बुटवल, असार १९
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा नेकपा एमालेले विजय प्राप्त गरेको छ। एमालेका मेयरपदका उम्मेदवार चित्र बहादुर कार्कीले १३ हजार ३६ मत प्रँप्त गरी सैनामैनाको पहिलो मेयरमा विजयी भएका छन्। कार्कीले कांग्रेसबाट मेयर पदका उम्मेदवार फणिन्द्र शर्मालाई पछाडी पार्दै विजयी भएका हुन्।
उपमेयर पनि एमालेकै बिना रानामगरले जितेकी छन्। रानाले १२ हजार ९ सय ६१ मत ल्याएर कांग्रेसकी लक्ष्मी चौधरीलाई हराएकी हुन्। शर्माले १० हजार ३ सय ५ मत प्राप्त गरेका छन् चौधरीले ९ हजार ७ सय ९ मत ल्याएकी छन्।
कुल ११ वटा वडा रहेको सैनामैनामा दुईवटा वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस र बाँकि नौ वटै वडामा एमाले विजयी भएको छ।
जसमध्ये वडा नं. १, २, ३, ५, ६, ७, ८, ९ र १० मा एमालेको पुरै प्यानल विजयी भएको छ भने वडा नं. ११ मा अध्यक्ष सहिद दुई सदस्य र वडा नं. ४ मा पुरै प्यानल नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ।
सैनामैना संगै रुपन्देहीमा सातावटा स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ। यसअघि कञ्चन, शुद्धोधन, गैडहवा, ओमसतिया, रोहिणी र मर्चवारी गाउंपालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ।
सार्वजनिक भएका स्थानीय तहमध्ये ३ वटामा संघीय समाजवादी फोरम, ३ वटामा नेकपा एमाले र एउटामा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ। जसमध्ये सैनामैना, कञ्चन र शुद्धोधनमा एमाले, गैंडहवा, रोहिणी र मर्चवारीमा संघिय समाजवादी फोरम र ओमसतिया गाउंपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी भएको हो।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १९, २०७४, ०५:१५:५१